Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) - Hello Sayarwon
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း)
ရေးသားသူ Phyo Wai Yan ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) ကဘာလဲ။
မွေးရာပါ အသားအရောင် နှင့် ဆံပင်များဖြူခြင်း ဆိုသည်မှာ အသားအရေ၊ဆံပင်နဲ့မျက်လုံးအရောင်တွေကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့ melain (မယ်လနင်) ထုတ်လုပ်မှုနည်း၍သော်လည်းကောင်း၊ လုံးဝမထုတ်နိုင်၍သော်လည်းကောင်းဖြစ်ရသော မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ဒီလိုမျိုးရောဂါရှိတဲ့လူတွေဟာ ဆံပင်၊အသားအရေနှင့် မျက်လုံးများအရောင်ဖျော့ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်လုံးဝမရှိခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမတူညီတဲ့အသွင်အပြင်ရှိခြင်း ဟာသူတို့ကို လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သီးခြားဖြစ်နေစေပြီး ခွဲခြားခြင်းခံရစေပါတယ်။ ဒီလိုလူအများစုဟာနေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီလိုမွေးရာပါ ရောဂါမျိုးကို ပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အဆင့်ဆင့်စောင့်ရှောက်မှုတွေယူ၍ အသားအရေကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံ ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီလိုရောဂါဟာ အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။ မည်သည့် အသက်အရွယ်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေတဲ့ အချက်တွေကို လျော့ချပြီး ရောဂါကို စီမံနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်များအတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသားအရေ အရောင်ကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ခြယ်ဓာတ် ပြဿနာကြောင့် ဒီလိုလူတွေရဲ့အသားအရေဟာ အဖြူကနေ အညိုရောင်အထိ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ ဒီလိုရောဂါမရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့အဖေအမေ၊ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အသားအရေနဲ့လည်း တူလုနီးပါး ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
ရောင်ခြယ်ဓာတ်ပါသော မှဲ့ (သို့) ရောင်ခြယ် မပါသော မှဲ့ ။ ရောင်ခြယ်မပါသော မှဲ့များသည် အများအားဖြင့် ပန်းရောင်သန်းသော အစက်အပြောက်များအဖြစ် ရှိကြပါတယ်။ အညိုရောင်အစက်အပြောက် မှဲ့ခြောက် များ အဖြစ်လည်း ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ဆံပင် ။ ရောင်ခြယ်ဓာတ်ပြဿနာကြောင့် ဒီလိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေရဲ့ ဆံပင်အရောင်ဟာ အဖြူကနေအညိုရောင် အထိ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတော့ ဆံပင်အရောင်ဟာ နက်မှောင်ကောင်း နက်မှောင်နေနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးအရောင်။ ရောင်ခြယ်ဓာတ်ပြဿနာကြောင့် ဒီလိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်လုံးအရောင်ဟာလည်း အပြာနုရောင်ကနေ အညိုရောင်အထိ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပြီး အသက်နဲ့လိုက်ကာ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
မွေးရာပါ အသားအရောင်၊ ဆံပင်ဖြူခြင်းရောဂါရှိသူတွေရဲ့ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့…
• မျက်လုံးများ အထိန်းအချုပ်မဲ့ ရှေ့နောက် အလျင်အမြန် လှုပ်ရှားခြင်း (Nystagmus)
• မျက်လုံးနှစ်လုံးဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ပြိုင်တူမကြည့်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုင်တူမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း
• အဝေးမှုန် သို့ အနီးမှုန်ခြင်း
• အလင်းရောင်ကို မခံနိုင်ခြင်း
• သင့်မျက်လုံးရဲ့ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်(သို့) မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ မှန်ဘီလူးဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲကွေးနေခြင်းကြောင့် အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း
အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ တခြားသောရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ပိုပြီးစုံစုံလင်လင်သိရဖို့အတွက်တော့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
သင် ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ကလေးဟာ အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါပြီ။
• မျက်လုံးများသူ့ဘာသာ ရှေ့နောက်အလျင်အမြန်ရွေ့လျားခြင်း (Nystagmus)
• မွေးစကတည်းကဆံပင် သို့ အရေပြားမှာအရောင်မပါရှိခြင်း
• ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဖူးရောင်လွယ်ခြင်း
• နာတာရှည် ကူးစက်ရောဂါ ပိုးဝင်ခြင်
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ရောဂါ အမျိူးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားကြပါတယ်။
Oculocutaneous albinism(OCA) ။ OCA ဟာ အသားအရေ ၊မျက်လုံးတွေနဲ့၊ဆံပင်တွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ သူ့ကိုအမျိုးအစားတွေ ထပ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်…
OCA 1 – tyrosinase လို့ခေါ်တဲ့အင်ဇိုင်း မလုံလောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး OCA 1a မှာဆိုရင် ဆံပင်တွေဖြူမယ်၊ အသားအရောင်နဲ့ မျက်လုံးအရောင်ဟာလည်း ဖျော့တော့နေပါလိမ့်မည်။ OCA 1b ရောဂါအမျိုးအစားမှာဆိုရင်တော့ အသားအရေ ၊ဆံပင်နဲ့မျက်လုံးအရောင်တို့ဟာအနည်းငယ်ဖျော့တော့နေပါလိမ့်မည်။
OCA2– ဒီအမျိုးအစားဟာဆိုရင်တော့ OCA2gene မလုံလောက်၍ မယ်လနင် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ကျဆင်း သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေမှာတော့ ဆံပင်နဲ့မျက်လုံးဟာ မွေးရာပါအရောင်ဖျော့နေပြီး ဆံပင်ကတော့ အဝါရောင်၊ကြေးဝါရောင်နဲ့အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
OCA3– ဒီအမျိုးအစားဟာဆိုရင်တော့ TYRP gene မလုံလောက်၍ဖြစ်ပြီး နီညိုရောင်အသားအရေ၊ နီကျင့် ကျင့်ဆံပင်နဲ့ မျက်လုံးမှာ အညိုရောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
OCA4– ဒီအမျိုးအစားကတော့ SLC 45A2 ပရိုတင်း မလုံလောက်၍ဖြစ်ပြီး လက္ခဏာတွေကတော့ OCA2 နှင့် တူညီပါတယ်။
Ocular albinism (OA) – ဒါဟာတော့ X ခရိုမိုဆုန်းပေါ်တွင် မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်၍ယောက်ျား လေးတွေမှာပဲ အဖြစ်များတာတွေ့ရပါတယ်။ ဆံပင်၊ အသားအရေနဲ့ မျက်လုံးအရောင်တွေကတော့ ပုံမှန်အရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပုံရိပ်ဖမ်း မြင်လွှာမှာတော့အရောင်မရှိပါဘူး။
Hermansky-Pudlak Syndrome (HPS) – ဒါဟာဆိုရင်တော့ မျိုးရိုးဗီဇ ၈မျိုးအနက် တစ်မျိုးမလုံလောက်၍ဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ OCA နှင့်တူပြီး အဆုတ်၊ အူလမ်းကြောင်းနဲ့ သွေးထွက်ခြင်း စတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Chediak-Higashi Syndrome – ဒါဟာဆိုရင် LYST gene မလုံလောက်၍ဖြစ်ပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ OCA နှင့်အလားတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောဂါရှိတဲ့သူတွေဟာ အညို သို့ ကြေးနီရောင်ဆံပင်၊အဖြူရောင်ကနေခဲရောင်အသားအရေနဲ့သွေးဖြူဥတွေမှာချို့ယွင်း ချက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
Griscelli Syndrome (GS) – ဒါဟာ မျိုးရိုးဗီဇ gene သုံးမျိုးတွင် တစ်မျိုးမလုံလောက်၍ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာဆိုရင်တော့ ဖြူစွတ်ခြင်းရောဂါ၊ ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာရောဂါနဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့ တွဲပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိရင်တော့ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာပဲ များသောအားဖြင့်သေတတ်ကြပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဒီရောဂါဟာ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မိသားစုမှာ ဒီလိုမျိုးရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်လည်းဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများသွားပါပြီ။
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
• ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပိုင်း စစ်ဆေးခြင်း
• အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းများကို ခွဲခြားခြင်း
• မျက်လုံးများကိုစစ်ဆေးခြင်း (အထိန်းအချုပ်မဲ့ မျက်လုံးရှေ့ နောက် မူမမှန် အလျင်အမြန်ရွေ့ လျားမှု Nystagmus၊ မျက်စိစွေခြင်း နဲ့ အလင်းကြောက်ခြင်း ရှိမရှိစစ်ဆေးရန် နှင့် မျက်လုံးအလင်းပြန်သည့်အခါ ဦးနှောက်လှိုင်းလှုပ်ရှားမှုတို့ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်)
• သင့်ကလေးရဲ့အသားအရေအရောင်နဲ့ အခြားမိသားစုဝင်များရဲ့ အသားအရေအရောင်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း၊
• မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်း (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူသော ရောဂါ နှင့်သက်ဆိုင်သော မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းမှုရှိမရှိလေ့လာရန်)
Albinism (မွေးရာပါ အသားအရောင်နှင့် ဆံပင်ဖြူခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒီရောဂါ အတွက်ကုသမှုမရှိပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ နေရောင်ခြည် အန္တရာယ်ကနေသာ သက်သာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
• အန္တရာယ်ရှိသောနေရောင်ခြည်မှရှောင်ကြဉ်ခြင်း ။ မျက်လုံးများနှင့် အသားအရေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ရန် နေကာမျက်မှန်တပ်ခြင်း၊ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်များဝတ်ဆင်ခြင်း၊ အနည်းဆုံး SPF 30 ပါသော နေလောင်ခံခရင်မ်လိမ်း ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ရပါမယ်။
• သင့်တော်တဲ့မျက်မှန်ကိုတပ်၍ အမြင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရပါမယ်။
• ပုံမှန်မဟုတ်သော မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုများကို ခွဲစိတ်ဖြေရှင်းရပါမယ်။
Albinism. http://www.healthline.com/health/albinism#Diagnosis6. Accessed July 15, 2016.
Albinism. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/albinism/basics/prevention/con-20029935. Accessed July 15, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုငျ 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 20, 2019